Ahoana ny fampiharana ny volanao amin'ny vokatra samihafa amin'ny alàlan'ny Mockups | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fampiharana ny volanao amin'ny vokatra samihafa amin'ny fampiasana Mockups
Namboarin'i alexandercho / Freepik
Te hampihatra ny volanao amin'ny vokatra marobe ve ianao? Mila manonta azy ireo ve ianao ary mamorona haingo hampiroboroboana azy ireo nefa manana teti-bola kely ianao? Eo amin'ny toerana mety ianao.
Ny mockups dia photomontages izay hahafahantsika mahita ny ho vokatr'ireo vokatra amin'ny fampiasana ny volavola tadiavinay, ary koa ny fampisehoana ireo mpanjifa mety hisafidy samihafa azon'izy ireo ianteherana.
Azontsika atao ny mampiasa karazan-drafitra marobe hamoronana Mockup, manomboka amin'ny sary tsotra ka hatramin'ny lamina na lamina, izay hanakona ny velaran'ny vokatra bebe kokoa. Mba ho tsara tarehy ny endrinao ary tsy ho pixelated raha lehibe amin'ny tranga misy vokatra ambonimbony dia manoro anao aho hijery ny lahatsoratro: Ahoana ny fomba hamoronana lamina amin'ny Photoshop.
Betsaka ny fanesoana eny an-tsena ahafahantsika manamboatra zavaboary an'arivony miaraka amina endrika tokana. Avy amin'ny haingon-trano (afaka manova ny famolavolana ny fanaka, ny rindrina, ny farafara, ny rugs, ny cushions ary ny lava sns), akanjo (T-shirt, pataloha, zipo ...), kojakoja (kitapo kitapo, poketra , kitapo ...), fitaovam-panoratana (kahie, tranga ...) ary izay rehetra azontsika eritreretina.
Afaka mahita pejy an-jatony maro miaraka amin'ny fanesoana maimaimpoana koa izahay. Amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny, rehefa hiara-miasa amin'ny Photoshop isika dia misintona ireo rakitra mety, izay ho an'ireo manana extension .PSD. Aza adino koa ny manonona ny loharanon'ny Mockup anao, tsy ny hiantsoana ilay mpanakanto namorona azy fotsiny, fa ny hamonjy ny tenanao amin'ireo olana ara-dalàna rehefa mampiasa ara-barotra ny Mockup anao.
Voalohany indrindra, soso-kevitra ny hamonjenanao ny volanao ho Photoshop Smart Object, hanovana azy io, araka ny fanazavako tamin'ny lahatsoratro teo aloha.
Dingana tokony harahina hampiasana Mockup
Hanombohana ny Mockup amin'ny Photoshop. Hanana sary banga isika. Ka mivoaka ny haingo izay hampiasaintsika tokony hataontsika manafina kapa, amin'ny ankapobeny dia holazaina amintsika hoe iza izy io miaraka amin'ny lohateniny manokana. Ka manery ny mason'ny sosona isika ary manafina azy.
Azontsika jerena ny fomba an'ity antontan-taratasy ity ahitana zavatra marani-tsaina isan-karazany, singa betsaka araka izay azo ovaina amin'ny haingon-trano. Tsindrio ilay tianao hanovana, manokatra varavarankely iray hafa hisehoana sary banga.
Io sary io no tokony hametrahantsika ny volavolantsika. Avy eo manindry izahay File> Misokatra hanokatra ny volavolantsika. izany hifidy isika dia hanome izahay Adikao ary apetaho amin'ny antontan-taratasy banga.
Manitsy ny antotan-taratasinay araka izay tianay izahay. Zava-dehibe ny fahitana ny halehiben'ny singa amin'ilay haingo resahina, tsy mitovy ny famolavolana ny lamba firakotra fa ny ondana. Raha mampiasa lamina ianao dia alao antoka fa ny habeny no mety. Manome izahay File> Tehirizo.
Miverina amin'ny seta indray isika izao. Ny famolavolana anay dia hapetraka eo amin'ny tranokalanao ho azy. Raha toa tsy tsara izany dia mila miverina amin'ilay antontan-taratasy teo aloha fotsiny isika, manova azy ary mametaka ny Save indray, sns sns mandra-pifanaraka amin'izay tadiavintsika.
Azontsika atao koa ny mandoko ny faritra ao amin'ny Mockup misy loko hifanaraka tsara kokoa amin'ny volavolainay. Mba hanaovana izany, raha tokony hametraka endrika amin'ny sary banga ianao, mifantina loko iray izahay, ny fitaovan'ny Vilany hosodoko ary tsindrio eo amin'ny sosona tsy misy ambadika (fa tsy amin'ny lafiny hafa, satria tsy mandeha ny fitaovana, mety voatery manafina azy isika mba hisehoan'ny loko).
Vonona ny volavolantsika, andao File> Save As. Raha tahirintsika amin'ny extension Photoshop dia afaka manova azy io isika avy eo. Ampiasao amin'ny tambajotra sosialy, amin'ny tranokalanao na alefaso any amin'ny mpanjifa mety, atoro anao ny hitahiry azy amin'ny endrika .JPEG.
Amin'ity fomba mora ity dia nitahiry teti-bola be izahay tamin'ny fakàna sary, haingon-trano, fanontana sns.
Raha sendra manana kaomandy ianao dia tsy maintsy entinao any amin'ny mpanonta manaraka ny torolalany. Tadidio fa matetika mampiasa maody CMYK izy ireo rehefa manonta, araka ny fanazavako amin'ity lahatsoratra teo aloha ity. Tokony ho raisinao ihany koa ny karazana rakitra angatahin'izy ireo, amin'ny ankapobeny .PNG na .JPEG, ary koa ny habeny.
Inona no andrasanao manomboka mamolavola?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fampiharana ny volanao amin'ny vokatra samihafa amin'ny fampiasana Mockups
Adobe Stock Audio dia zava-misy satria nambaran'ny Adobe ora lasa izay
Ahoana ny fomba hamoronana lamina amin'ny Photoshop